तपाईंको हातमा पैसा बच्दैन ? यस्ता छन् पैसा बचाउने तरिका - CNN EXPRESS
काठमाडौँ । तपाईंले आफुले कमाएको पैसा कती बचत गर्न सक्नु भएको छैन रु तपाईं कमाएको पैसा सबै खर्च गरेर हैरान हुनुहुन्छ ? आज हामीले पैसा कसरी बचाउने भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ । जुन कुराले तपाईंलाई सहयोग गरोस् ।
तपाईंको पनि कमाएको सबै पैसा खर्च गर्ने वा बचत नगर्ने समस्या छ भने विभिन्न उपायको अवलम्वन गर्न सक्नु हुन्छ !
खर्चको सूची बनाउनुस्
तपाईंले ससानोदेखि ठूलोसम्म खर्च गर्ने शीर्षक बनाउनुस् । यसले तपाईको आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्छ । ठूलो खर्चहरु घर बनाउन, कार खरिद गर्न, बालबालिकाको पढाइलगायतका शीर्षक जब तपाईंले लेख्नुहुन्छ तब खर्च कटौती सुरु हुन्छ ।
कार्डको प्रयोग कम गर्नुस्
क्रेडिट कार्ड वा एटिएम कार्डको माध्यमबाट पैसा खर्च गर्न रोक्नुपर्छ । सबै प्रकारका खर्च गर्ने कार्डबाट थाल्नु भएको छ भने त्यो कुरा नियन्त्रण गर्नुस् ।
आफूले कुनै पनि प्रकारको कर्जा लिने र दिने काम नगर्नुस् । तपाईंले कसैसँग कर्जा लिनु भएको छ भने त्यो तत्काल भुक्तान गर्नुस् र आफूले दिएको कर्जा पनि माग्न थाल्नुस् ।
आपतकालिन कोष बनाउनुस्
बचतका लागि तपाईंले आपतकालिन कोष बनाएर योजना बनाउनुहोस। यस्तो कोषले तपाईंलाई अन्तिम अवस्थामा साथ दिन्छ ।
हामीले अत्यावश्यक वस्तु वा आवश्यक आवश्यकताका रुपमा कहिल्यै पनि छुट्याएका हुँदैनौं । त्यसैले गर्दा हामीसँग पैसा भएको बेलामा अगाडि जे देखिन्छ त्यसैमा खर्च गछौं । यसैले बेलैमा प्राथमिकता छनोट गर्दा पैसा बचत गर्न सहयोग मिल्छ ।
बढिरहेको बचतको बारेमा जानकारी लिइरहर्नुहोस्
बैंकमा भएको बचतलाई बेलाबेलामा गएर हेरिरहने बानि गर्नाले पनि बचतलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग मिल्छ । यसरी बचत हेरिरहँदा अघिल्लो महिनाको बचत भन्दा कम भएमा त्यसले झस्काउँछ । यदि यसरी बचत हेरिरहँदा अघिल्लो महिना भन्दा कम भएमा कारणको खोजि गरि अर्को महिना देखि त्यसलाई समाधान गरि पुनः बचत बढाउन सकिन्छ ।
घरमा खाने बानी बसाउनुहोस
सपिंग कम गर्नुहोस्
यदी तपाइँलाई सपिंग गर्ने बानी बसेको छ भने त्यसलाई कम गर्नुहोस् । अनलाइन मार्फत पनि आजकल तपाइँले सपिंग गर्न सक्नु हुनेछ यसो गर्दा तपाइको सपिंग गर्न बजार चहार्ने र अनेकौ सामानहरु समेत किन्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
पैसा बचाउछु भन्ने दृढ संकल्प राख्नुहोस
यदी तपाइँले परिवारको कसैसंग बार्षिक वा मासिक रुपमा कसले कति पैसा बचाउन सक्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा गर्न सक्नु भएको खण्डमा पैसा बचाउने अभियान सफल हुन सक्छ । कसले बढी पैसा बनाउने भन्ने होडमा तपाइले खर्च समेत कन्ट्रोल गर्न थाल्नुहुनेछ ।
पुरानो सामानलाई प्रयोग गर्नुहोस्
आफ्नो पुराना समानहरुलाई पुनस् प्रयोग गर्नुहोस् । उदाहरणको लागि रिचार्जेवल ब्याट्री किन्नुहोस्, मसि भर्न मिल्ने कलम किन्नुहोस । यस्तै तरिकाले हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने धेरै सामानहरु पुनस् प्रयोग गर्न सक्छौं ।
पैसा बचाउनका लागि योजनाअनुसार आफूलाई अगाडि बढाउनुस् । खर्च कसरी र किन गर्ने भन्ने कुराको एक पटक समिक्षा गर्नुभयो भने पनि धेरै खर्च कटौती हुन्छ ।
Previous: पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? यी टिप्स तपाईंका लागि….
Next: कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उपलब्धता सहज बनाउने ‘अध्यादेश’ राष्ट्रिय सभामा पेश